News - Taariikhda soo saarida tuubbada aan xuduud lahayn
Taariikhda wax soo saarka tuubo aan xuduud lahayn
Sannadihii 1960-meeyadii sababtuna waxay ahayd soo-saaris cusub oo saddex-sare ah oo xagal-toosiye ah (oo loo yaqaan 'Transval mill'), hababkaan ayaa si dhakhso leh u soo kordhay. Makiinadda cusub waxaa lagu gartaa rogrogmada degdegga ah ee marinka gadaal gadaasha gadaal u noqoshada xagal rogista, taas oo ka hortageysa dabada inay sameysato saddexagal sameeya noocyada wax soo saarka saamiga dhexroorka dibadda iyo dhumucda derbiga ayaa laga ballaariyay 12 ilaa 35, taas oo aan soo saari karin oo keliya tuubooyinka dhuuban ee dhuuban, laakiin sidoo kale hagaajin kara awoodda wax soo saar.
Habka dhaqameed ee tuubada tuubadu waa in bileynta ay ku dalooshanto cadaadis biyo ah laguna fidinayo koob dhogor ah iyadoo la marinayo tuubbo iskutallaab ah oo mandrel dheer la gelinayo gunta hoose ee koobka daboolka ah iyadoo lagu riixayo usha riixaysa isla markaana si tartiib tartiib ah loogu yareynayo godad taxane ah duudduuban yar - nooca dhinta jir, top giringiriyey tuubooyinka. Nooca wax soo saarka noocan ah ayaa leh maalgashi ka yar qalabka waxaana loo isticmaali karaa qashinka joogtada ah, wuxuu soo saari karaa dhexroor ilaa 1070mm, dhumucda derbiga ilaa 200mm ee dhuumaha dheeriga ah ee dheeraadka ah, laakiin waxtarka wax soo saarka oo hooseeya, gidaar ka sii dhumuc weyn, dherer biibiile ka gaaban waxqabadka Kadib markii ay soo ifbaxday nidaamka cusub ee CPE, tuubooyinka maran waxaa lagu daloolay iskutallaab iskutallaab ah waxaana lagu fidiyay tuubooyin iyadoo la duubayo marka la xiro, taas oo ka adkaata habka dhaqanka.
Qaar ka mid ah cilladaha soo saarista biibiile aan xuduud lahayn waxay noqdeen hab wanaagsan oo waxtar dhaqaale.
Soo saarida tuubada laydhka, billet-ka wareega diirran marka hore waa la dalooliyaa ama dib ayaa loo cusbooneysiiyaa ka dibna waa la kululeeyaa iyada oo la gelinayo cusbada qubeyska waa la kululeynayaa, dusha gudahana waxaa lagu dahaadhaa saliid waxaana lagu quudiyaa soo-saaraha, iyada oo loo marayo godka dhinta iyo iyada oo loo marayo birta farqiga u dhexeeya inta udhaxeysa mandrel-ka waxaa lagu tuujiyay tuubooyin bir ah.
Waxaa badanaa loo isticmaalaa soo saarida tuubooyin superalloy caag ah oo hooseeya, tuubooyin qaab gaar ah leh, tuubooyin isku dhafan iyo tuubooyin bir midab leh, iwm Habkani wuxuu leeyahay wax soo saar ballaaran oo kala duwan, laakiin wax soo saar hooseeya Sanadihii la soo dhaafay, maadooyinka caaryada awgeed, saliidaha, xawaaraha extrusion iyo wixii la mid ah ayaa la hagaajiyay, soo saarida tuubada extrusion sidoo kale waa la sameeyay.
Tuubada duuduuban ee duubista hagaha ayaa sidoo kale loo yaqaan 'Diessel daloolin tuubbo dillaacsan oo leh manbar dhaadheer oo dhuuban dhuuban oo tubbo bir ah ayaa lagu duudduubay dhalada miiska saxanka.Milaalku wuxuu la mid yahay labo - iskutallaab sare - feer rogid ah marka laga reebo saxanka hagaha go'an ayaa loo beddelay saxanka hagaha firfircoon Sida wax soo saarka mandrel dheer, tuubada birta ah ee birta ah ee birta ah oo siman, oo aan xoq lahayn; Laakiin kharashka qalabku waa weyn yahay, hagaajin karo.Waxa badanaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro 150mm tuubooyin bir ah oo dhexdhexaad ah oo soo socda ee loo yaqaan 'USES.At xilligan xaadirka ah, waa dhif in la isticmaalo mana laha rajo horumar weyn.
Wax soosaarka tuubada miiqan waxay noqon doontaa mid siman ama banaan oo mashiinka wareega ah iyada oo loo marayo hal ama in kabadan oo miiqan oo been abuur ah oo bir bir ah oo dhuuban. Saxsanaanta sare, aalado farsamo oo wanaagsan, cabirro kala duwan, laakiin waxtarka wax soo saarka ayaa hooseeya. dhuumaha birta birta ah, laakiin sidoo kale aad iyo aad ayaa loogu isticmaalaa wax soo saarka.
Tuubo bir ah Marka laga reebo qalabka guryaha, weelasha kiimikada iyo qaybaha mashiinka, inta badan loo isticmaalo warshadaha milatariga.
Sanadihii 1970-yadii, iyadoo la adeegsanayo habka wareejinta adag ayaa awood u yeelatay inay soo saarto dhexroor tuubbo ah ilaa 6000mm, dhexroor iyo dhumucdiisuna waxay gaarayaan in ka badan 10000 dhexroor weyn oo dhuuban oo aad u dhuuban iyo qalabka dhuumaha qaabeeya.
Wareegtada qabow, soosaarida sawirada qabow ee soosaarka gidaarka yar ee dhumucda yar, saxnaanta iyo qaababka birta u qaabeysan qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka wareegga badan.
Lixdameeyadii, waxay bilawday inay ubaxdo jihada xawaaraha sare, khadadka badan, istaroog dheer iyo tuubbo dhaadheer. Intaas waxaa sii dheer, duub yar oo duudduuban oo qabow duudduuban ayaa sidoo kale la soo saaray, kaas oo inta badan loo isticmaalo wax soo saarka biibiile sax ah oo aad u dhuuban oo dhumucdiisuna ka yar tahay 1mm. Qalabka rogid ee qabow waa mid adag, ka shaqeynta qalabka waa adag tahay, iyo kala duwanaanta iyo soocidda qeexitaanka ma ahan mid dabacsan Nidaamka isku dhafan ee rogid qabow iyo sawir qabow ayaa badanaa la qaataa, taas oo ah, darbiga waxaa marka hore lagu yareeyaa rogista qabow si loo helo qallooc ballaaran, ka dibna noocyo kala duwan ayaa lagu helaa shaashadda sawir qabow.